Gaashaandhiga barriga Afrika oo isla raadinaya Istaraatiyad amaanka looga wada shaqaynayo – Radio Daljir
Agoosto 19, 2013 3:24 b 0
Nairobi, August 19, 2013 – Wasaaradaha gaashaandhiga ee dalalka ku mideysan barriga Afrika ayaa ka shiray xaalada guud ee gobolka, ?iyo sidii loo heli lahaa istaraajiyad muuqata oo dhanka amaanka ah, taas oo dhex maraysa dalalka gobolka.
Kulanka oo ay joogeen madaxda wasaaradaha gaashaandhiga ee dalalka Bariga Afrika oo ka dhacay Nairobi, ayaa intiisa badan waxaa diirada lagu saaray amaanka guud ee gobolka iyo sidii la isula xiriir lahaa, loogana wada hortegi lahaa khatarta argagixisanimo.
Wakaalada wararka shiinaha ee Xinhua ayaa shaacisay in ?wasiirada iyo saraakiisha kulanka joogay ay diirada sareen in la isku xirnaado mar kasta, waxaa kaloo la isla soo qaaday sidii midowga Afrika ay qeyb uga noqon lahaayeen xasiloonida iyo horumarka gobolka.
Somali, Djibouti, Ethiopia, Sudan, the Comoros, Eritrea, Rwanda, Madagascar, Kenya iyo the Seychelles, ayaa kulanka waxaa ka joogay saraakiil iyo madax ka socda wasaaradaha gaashaandhiga ee dalalkaas, Xinhua waxay sheegtay in kulanka aad loogu soo qaaday Soomaaliya.
Dalalka gobolka waxay go?aansadeen in la taageero ciidamada midowga Afrika ee howgalka ka wadda Soomaaliya iyo in meel looga ?soo jeensado kooxda Al-shabaab oo ku sii fideysa inta badan gobolka, xili ay wax ka bedeleen nooca dagaalka ay ka wadaan gobolka oo dhan.
Madaxda gobolka iyo saraakiil ka socda midowga Afrika waxay ku baaqeen in lala socodsiiyo caalamka taageerada loo baahan yahay ee la xiriirta wada-shaqeynta, waxaa lagu cel-celiyey in ay muhiim tahay in dhexda loo xirto in laga shaqeeyo amaanka gobolka oo idil.